स्वास्थ्यको ख्याल गरौं, बिहान उठेर पढ्नै सक्नुहुन्न भने आजै जान्नुहोस् यो उपयोगी जुक्ति — SuchanaKendra.Com
स्वास्थ्यको ख्याल गरौं, बिहान उठेर पढ्नै सक्नुहुन्न भने आजै जान्नुहोस् यो उपयोगी जुक्ति
काठमाडौ । बिहानै उठेर पढ्नु अति नै लाभदायी मानिन्छ । शान्ति वाताबरण र पूर्ण आराम दिमागले जे पढ्यो त्यही टिप्छ । तर यो चिसो मौसममा बिहान उठ्न मन लाग्दैन । अलार्म बार बार बजिरहेको हुन्छ तर तपाइलाइ सिरकको तातो तापले बेस्मरी अंगालो हालिरहेको हुन्छ । यसैले उठ्नै सक्नुहुन्न । अलार्मलाइ स्टप गर्दै तपाइ तातो तापको स्पर्शमै रमाउनुहुन्छ । कति को त मोबाएल नै साइलेन्टमा राखेर सुत्ने पनि बानी हुन्छ अलार्मले दिइरहेको सन्देश बुझ्न सक्नहुन्न । त्यसै त हामी अक्सर अल्छी छौ । अल्छी भएकै कारण तपाइ केही मा सफलता पाउनुहुन्न सफलतै पाउनुहुन्न भनेको हैन तर अरूको तुलनामा कम भन्न खोजेको, याद गर्नु त तपाइ सानो छदा बाबा आमाले बिहानै उठेर पढ छोरा पढ किन भन्नुहुन्थो ?
तपाइ बाबा आमा सँगै रिसाउनुहुन्थो ह्या कति किच किच गरेको मलाइ थाहा छैन कति खेर उठेर पढ्नुपर्छ ? यही कुरामा कतिको त बाआमा सँग झगडा नै पर्यो होला ,हामी समयलाइ बुझ्न सक्दैनौ अनि पछुताउनु सिबाए केही हुदैन हामिसँग, हामी कतिलाइ त भोलिबादले जरो नै गाडीसकेको हुन्छ आज के पढ्नु भोलि चाहिँ बिहानै उठेर पढ्छु, तपाइको यो भोलिबादको निरन्तरताले तपाइलाइ नै डसिरहेको हुन्छ तर हामि बुझ्दैनौ । किन कि हामी दुख नै गर्न चाहदैनौ हामि संघर्ष नै गर्न चाहदैनौ, हामिलाइ त बिहान भरी सुत्न मन लाग्छ ।
मेरो पनि यही बानी थियो तर मैले यो बानीलाइ सुधारे बिहान छिटै उठ्न थालेदेखि परिक्षाको समयमा मैले कहिले तनाब लिनु परेन । हरेक पोइन्टहरूलाइ गीत अथबा सुत्र बनाएर पढ्न थाले । अलार्मको सन्देशलाइ बुझ्न थाले , त्यसैले म अहिले ४ बजे उठ्नु छ भने ३ बजेको अलार्म लगाउछु र ४ बजे उठिनै सकेको हुन्छु।रूटिन बनाएर पढ्छु बिचमा मनोरन्जनका लागि समय छुट्याउछु जसले गर्दा हरेक कुरा हरू सहज बन्दै गए जसले गर्दा अहिले सम्म पनि पढ्न सहज भइरहेको छ । एकपटक मनन गर्नुस अनि तपाइ आफुले आफुलाइ पढाउनुस यसबाट तपाइले नयाँ जिवन पाउनुहुन्छ। म उठ्नुपर्छ भन्नने बोध गर्नुहोस् । दिमागी आलार्म लगाउँनुहोस् । यो सबै सम्भव छ ।